बागवानी र DIY
हामी बागवानी मन पराउछौं र कुनै गतिविधि को रूप मा, DIY उपस्थित छ। संग DIY बागवानी मा हामी गाईडहरू र ट्यूटोरियलहरूको लागि सन्दर्भ गर्दछौं उपकरण र वस्तुहरु हाम्रो बगैचा को लागी बनाउनुहोस्.
हामी के चाहान्छौं कि जब तपाईको बगैचाको लागि तपाईले स्वचालित पानी पिउनदेखि लिएर फूलहरू, हरितगृह वा बीउ रोप्ने उपकरणको निर्माणसम्म विचार गर्नुहुन्छ, तपाई कहाँ किन्न सक्नुहुन्छ त्यसमा नहेर्नुहोस् तर यहाँ हेर्नुहोस् र सोच्नुहोस् तपाईं आफैले यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ.
कम्पोस्ट कसरी गर्ने
मैले देखेको केही भिडियोहरूबाट कम्पोस्टिंगको शीर्षकमा फर्कन्छु चार्ल्स डोउडि। जुन नो डिग, नो डिगको दर्शनमा आधारित छ (जुन हामी अर्को लेखमा कुरा गर्नेछौं)। डोविंगले यसको बगैंचामा कम्पोस्ट मात्र प्रयोग गर्दछ। सबैका लागि कम्पोस्ट। र यो दुबैलाई यो सिर्जना गर्न र यसलाई प्रयोग गर्न र बिरूवाको रूपमा र तपाईंको बगैंचाको देखभाल गर्न सिकाउँछ।
कम्पोस्ट रेसिपीहरू त्यहाँ दर्जनौं छन्, यद्यपि सबै समान सिद्धान्तमा आधारित छन् तर प्रत्येकले आ-आफ्नै तरीकाले गर्छ।
मैले धेरै सम्बन्धित सामग्री देखेको छु र पढेको छु र त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् जसले प्रक्रियाको छिटो बनाउनको लागि यसलाई यथासक्दो चाँडो गर्न कोशिस गर्छन्, अरू जसले मासु जोड्दछन्, बचेका पकाएको खाना, तर म यो देख्न सक्दिन। मासु थप्नु यस प्रकारको एरोबिक सड्नको लागि गल्ती जस्तो देखिन्छ, अर्को कुरा यो हो कि तपाईं शहरी ठोस फोहोरबाट कम्पोस्ट गर्नुहुन्छ, जस्तै डिब्बेमा संकलन गरिएका, तर तिनीहरू सामान्यतया एनेरोबिक प्रक्रियाहरूबाट गरिन्छ र हामी बिल्कुलै फरक कुराको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं।
म एउटा प्रयोग गर्दैछु बीज कटाउन कम्बल तताउने। यो एक इलेक्ट्रीक (थर्मल) कम्बल हो जसले माटोको तापमान लगभग १० डिग्री सेल्सियस बढाउँछ र बीउको जन्म र काट्ने को जरा गति दिन्छ। यसको बीउको साथ मैले साँच्चिकै राम्रो परिणामहरू पाएको छु हबैरो मिर्च। केवल 8 दिन मा अंकुरण बनाउन
त्यहाँ बिभिन्न मोडलहरू छन्, आकारको अतिरिक्त उनीहरू शक्तिबाट फरक छन्। त्यहाँ १.17,5..10 डब्ल्यूका हुन् जुन प्राय: परिवेशको तापमान १०% ले बढाउँछन् र .40,5०..10 डब्ल्यूको जुन १० र २० डिग्री बीचमा उठ्छ। जब तपाईं यसलाई अपरेसनमा राख्नुहुन्छ तपाईंले अन्तिम २० मिनेटसम्म यसको तापक्रम नगरी २० मिनेट कुर्नुपर्नेछ। तिनीहरू तर्साउन वा बिरुवालाई अगाडि बढाउनको लागि धेरै राम्ररी काम गर्दछन्। यस वर्ष जहिले पनि म चीज रोप्ने ढिलो भइसक्यो, तर हे। मसँग पहिले नै अर्को बर्षको लागि कम्बल छ। मसँग छ यो किनेको
जहाँसम्म तपाई सबै कुरा पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न चाहानुहुन्छ तपाईले एउटा राख्न सक्नुहुन्छ यो जस्तै थर्मोस्टेट, वा एक अर्डिनो र रिलेमा आधारित एक बनाउनुहोस् (यो प्रोजेक्ट हो जुन म थाँती रहेको छ)।
एक कद्दू बाहिर क्यान्टीन बनाउन कसरी
पछिल्लो गर्मी देखि म एक सुख्खा छ कद्दू (ड्यापर लौकी) जस्तै तीर्थयात्रा कद्दू, तर यो धेरै बढेको आकारको साथ।
र समय यसको साथ केहि गर्न समय आएको छ ;-)
किनकि मैले केवल १ बचत गरेको छु। म यसलाई एकको रूपमा प्रयोग गर्न चाहान्छु क्यान्टिनमा पानी बोक्न। यसको निर्माण धेरै सरल छ। हामीले भर्खर यसलाई खाली गर्नुपर्नेछ र यसलाई भत्काउनु पर्छ।
सौर्य ड्रिप इरिगेसन - कोन्डेन्स्कम्प्रेसर
मा जानकारी खोज्दै गर्मी को लागी स्वचालित घर सिंचाई म यो आश्चर्य को पार मा आयो।
हो; यो जस्तो देखिन्छ, यो प्रविधिको आश्चर्यको कुरा होईन, यो सत्य हो, तिनीहरू केवल प्लास्टिकका बोतलहरू हुन् तर उपकरण यसको सबै सरलताले हामीलाई स्वचालित सिंचाई अनुमति दिन्छ र पर्याप्त पानी बचत.
यो बारेमा छ Kondeskompressor, :) सौर ड्रिप सिंचाई प्रणाली। प्रणाली वाष्पीकरण र पानीको संक्षेपण मा आधारित छ संयंत्र आफूलाई स्वयम् आवश्यक आर्द्रता प्रदान गर्न।
प्यालेटोक्टस - प्यालेटको साथ क्याक्टसको लागि प्लान्टर कसरी बनाउने
केही दिन अघि हामीले प्यालेटको साथ ठाडो बगैचा कसरी बनाउने भनेर देख्यौं।
आज हामी एक धेरै यस्तै परिमार्जन ल्याउँछौं, तर यसले क्रसबार प्रयोग गरेर समावेश गर्दछ प्यालेटहरू बनाउन। राख्न आदर्श क्याक्टस र रसीला वा मांसल यसले सुक्खा भूभाग धेरै राम्रोसँग सामना गर्छ।
एक प्यालेटको साथ ठाडो बगैचा कसरी बनाउने
के तपाईंसँग बालकनी छ र तपाईंलाई बोटबिरुवा र बागवानी मन पर्छ? राम्रो हेर कसरी एक प्यालेट एक वास्तविक ठाडो बगैचा मा बदल्नुहोस्.
तिनीहरू छैनन् बेबिलोनको बगैंचा, तर तपाईं उच्च ;-) शुरू
म पक्का छु कि तपाईंले यो मनपराउनुभएको छ, जस्तै। त्यसैले हामी यहाँ जान्छौं।
कसरी रक्सीको बोतलबाट एक मशाल बनाउने
यो ती ट्यूटोरियलहरू मध्ये एक हो जुन मैले अर्को ब्लगबाट अर्कोमा हाम फालेर पत्ता लगाएको छु।
विचार हो बोतलहरूलाई पुनः टॉर्चमा बदल्न प्रयोग गर्नुहोस्. गर्मी मा तपाइँको बगैचा मा तिनीहरूलाई आदर्श हो।
यी हामीलाई चाहिने सामग्री हुन्। सबै एकदम स्पष्ट, स्पष्ट गर्न अझ राम्रो ...
२. टेफ्लन हो, यस प्रकारको प्लम्बिंगमा।
And र Cou. कपलिंग र तामा टोपी
प्यालेटहरूसँग कसरी घर बनाउने कम्पोजर बनाउने
मैले सुरु गरेको छु कम्पोस्ट बनाउनुहोस् र मैले गरे Pallet को साथ धेरै साधारण घर बनाइएको कम्पोजर। म केहि फोटोहरू र केही सानो एनोटेशनहरू छोड्दछु ताकि तपाईं यो देख्न सक्नुहुनेछ कि मैले यो कसरी गरेको छु र लेखको अन्त्यमा तपाईंले प्यालेटले बनेको अर्को मोडल देख्नुहुनेछ, कम्पोस्ट बिन्डहरूको नक्कल गर्दै।
म पुरानो प्यालेटहरू प्रयोग गर्दछु जुन म व्यक्ति वा कम्पनीहरूबाट प्रयोग गर्दै थिए जुन उनीहरूलाई फ्याँकिदै थिए।
मैले प्रयोग गरेको आकार यूरो प्यालेटहरू हुन्, त्यसैले तपाईं पहिले नै १.२० × ०.1,20 मिटर परिमाण जान्नुहुन्छ ताकि कम्पोस्ट बिनको आधार १ मीटर x ०.0,8 मीटर उच्च हुनेछ।
कसरी घर बनाउने बगैचा बर्ड फिडर बनाउन
वसन्त यहाँ छ र खेतहरू, बगैंचा र शहरहरू प्रजनन startingतु सुरू हुने चराले भरिएका छन्।
यदि तपाईंसँग बगैचा, वा ठाउँ जहाँ चराहरू आउँछन्, हामी यसलाई अल्ट्रा सस्तो फिडर केही Ikea प्लेटहरूमार्फत बनाउन सक्छौं।
यस फिडर र अन्यहरू बीचको भिन्नता जुन हामी अन्य सामग्रीहरूसँग गर्न सक्दछौं कि यो प्लास्टिकको बोतलले बनेको भन्दा अलि बढी ग्लैमर हो।
हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू निम्न छविमा प्रतिनिधित्व गरिएका छन्, ती धेरै कम र धेरै सस्तो छन्।
कसरी ड्रमको साथ घर बनाउने कम्पोजर बनाउने
मेरो दिमागमा विचार आएको छ एक घर बनाउने कम्पोजर बनाउनुहोस् भान्साकोठाबाट तरकारीको फोहोर उठाउन।
म यसको बारेमा बढी अनुसन्धान गर्न चाहन्छु एरोबिक, एरोबिक र वर्मिक कम्पोस्टरहरू। यसैले म तपाईंलाई जानकारीहरू छोड्न सक्छु, विभिन्न प्रकारका प्लेयरहरू जुन मैले फेला पारेँ र केही परीक्षणहरू गर्छु जुन म गर्छु।
ड्रममा प्वालहरू यति छन् कि यो राम्रोसँग वातित छ र जैविक सामग्री कम्पोस्ट राम्रोसँग छ। यद्यपि मैले यस प्रकारको कम्पोजरमा धेरै नराम्रो असरहरू देखेको छु।